Kungani udinga gyroscope ocingweni?
Ngisho yishumi edlule amafoni nge uxhumano Inthanethi, infrared ubuchwepheshe noma i-Bluetooth wawuyinto engavamile. Manje, zonke lezi imisebenzi sekuyinsakavukela, futhi abanye kuzo babeze wakwazi zibuye ziphelelwe isikhathi. Abakhiqizi ukungezwa onobuhle zabo, izici ezintsha, enye yazo - a gyroscope ocingweni. Unjani ngempela uNkulunkulu, lokho okudingekayo, ungasifaka kanjani isicelo?
Abantu abaningi bavame ukudida imiqondo emibili. Asivume.
Accelerometer, noma G-inzwa - idivaysi uqaphe devaysa isikhundla isihlobo ukuba axis awo - ngokwesibonelo, bajikela kwesokunxele noma kwesokudla, ukuze zisebenze kimi naku ngokwami.
Gyro ivumela ifoni ukurekhoda hhayi kuphela lezi zinyathelo kodwa futhi noma iyiphi inhlangano zedivayisi emkhathini, kanye ulungise isivinini sokuhamba. Ngakho-ke, singaba njengedumo accelerometer ezithuthukisiwe.
Isimiso ezisebenza we gyroscope
I-apharathasi kuyinto disc okuyinto eqondiswa ozimele ezimbili ngezinhlamvu ezihlelwa ngesandla. Ngokushesha iphendula. Lapho kushintshwa isimo kohlaka, disc akusho nakancane ukuwushintsha. Uma njalo balondoloze Ukujikeleza, isibonelo, i motor ngogesi, kungenzeka ukunquma ngokunembile isikhundla into ku ngalo gyroscope. Lokhu kungase kusetshenziswe ukucacisa ikhampasi.
Ngisho nangekhulu nesishiyagalolunye, le gyroscope isetshenzisiwe ngamasosha asolwandle kanye amakhotho wezakhamuzi, ngoba nalo ungakwazi ukunquma kakhulu ngokunembile amaphuzu yekhampasi. Wabuye uthola isebenza zezindiza kanye rocketry.
Umklamo kudivayisi iPhone kuhlukile kancane kusukela classical, ngoba yenziwa ngesisekelo inzwa microelectromechanical. Umgomo we senzo uhlala okufanayo.
Gyro ifoni unenkambu esikhulu kakhulu kwesicelo. Yiqiniso, okokuqala kuba ezihlukahlukene imidlalo ukuthi ukusebenzisa lobu buchwepheshe. Ethandwa kakhulu phakathi kwabo - zamageyimu futhi abacibishelayo. Ngokwesibonelo: abacibishelayo wasebenzisa lokho okubizwa ngokuthi "ngokoqobo augmented" - isibhamu kwenziwa ngokucindezela, kodwa ukuze aim, kubalulekile ukuba ukushintsha isikhundla smart phone - uhamba ikhamera in the game ngendlela efanayo.
Ngaphandle imidlalo, i-gyroscope isetshenziswa ezihlukahlukene isofthiwe. Ngalo, ukufinyelela imisebenzi ehlukahlukene iba lula kakhulu. Ngokwesibonelo, ezinye izinhlelo zokusebenza by shaking idivayisi kwenzeka buyekeza-Bluetooth. Nokho lokhu Ubuchwepheshe isetshenziswa eziningi izicelo ezithile ezisetshenziswa ukukala ukuthambekela (ezingeni) ye-engeli.
Imboni mobile muva nje ukuhlakulela ngokushesha kakhulu. Muva nje, i-gyro ocingweni kwaba eseyintsha imfashini manje isetshenziswa kabanzi futhi kubhekwa ingxenye komkhuba iyiphi i-smartphone. Mhlawumbe ngemva kweminyaka embalwa kuyoba isizukulwane esisha amadivaysi uyakwazi projecting isithombe kunoma iphuzu emkhathini, ngoba isayensi iqhubekela phambili ngokukhulu ukushesha. Okwamanje, senza bayaqagela ngakho bese bebheka izindlela ukusebenzisa ubuchwepheshe esiye yasungulwa.
Iphone "neverlok" - kunjani lokho? Kungani kubalulekile ukuba uhlole isimo ucingo ngaphambi uthenga?
Lumia 950: incazelo
Smartphone Samsung Galaxy K Zoom - Ukubuyekeza namazwana kusuka ochwepheshe
Indlela ukuhlanza iPhone 4 ngokuphelele ngaphambi ukudayiswa: imiyalelo enemininingwane
Indlela yokwenza amanzi isisekelo kahle?
I-bobbin tape recorder iyindlela yokuchaza amarekhodi angavunyelwe e-USSR
Indlela yokwenza isikebhe wephepha imidlalo
SUV Kuhle abasemakilasini ezahlukene